Dowladda Turkey oo baraysa tobaneeyo qof oo adeegsaday baasabooro dowladda bixisay, si ay hab sharci ah ugu galaan Yurub, balse aan dib usoo laaban. | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Dowladda Turkey oo baraysa tobaneeyo qof oo adeegsaday baasabooro dowladda bixisay, si...
Dowladda Turkey oo baraysa tobaneeyo qof oo adeegsaday baasabooro dowladda bixisay, si ay hab sharci ah ugu galaan Yurub, balse aan dib usoo laaban.
Dowladda Turkey ayaa Isniintii sheegtay inay ballaarisay baaritaan lagu sameynayo tobaneeyo qof oo adeegsaday baasabooro gaar ah, oo ay dowladda bixisay, si ay hab sharci ah ugu galaan Yurub, balse aan dib usoo laaban.
Fadeexaddan ayaa qabsatay warbahainta gudaha tan iyo markii ay soo shaac baxday tododbaadkii tegay in 43 qof oo sitay baasaboorka gaarka ah ee midbka cowlka, ama loo yaqaan Grey Passport, ay bishii November galeen Jarmalka, si ay uga qeyb-galaan tababar ku saabsan deegaanka, hase yeeshee aysan dib ugu soo laabn Turkey.
Previous articleMadaxweynihii la dilay ee Chad Idriss Déby oo wiilkiisa General Mahamat Kaka loo magacaabay hoggaamiyaha waddanka.
Next articlebaaritaankii Dilkii George Floyd oo lagu soo gaba gabeeyay magaalada Minneapolis
Wargeyska Daily Nation ee Nairobi oo qoray xog ku saabsan...